असामान्य uterine रक्तस्राव: सङ्केत गर्छ, वर्गीकरण र नतिजा
हरेक महिला गर्न परिचित भएको लैंगिक पर्चा को रक्तपातपूर्ण स्राव संग। तिनीहरूले नियमित देखा र धेरै दिनको लागि जारी। मासिक को गर्भाशय देखि रक्तस्राव बच्चाहरु छन् क्षमता अर्थात्, बालक जन्ममा उमेर सबै स्वस्थ महिलाहरु अवलोकन छन्। यो घटना मानिन्छ सामान्य (महिनावारी)। तैपनि, असामान्य uterine रक्तस्राव छन्। शरीर का उल्लंघन उत्पन्न जब उनि आउँदैन। यी अधिकांश कारण gynecological रोगहरु आक्रान्त देखिन्छन्। तिनीहरूले गम्भीर परिणाम हुन सक्छ किनभने प्रायजसो, तिनीहरूले खतरनाक छन्।
असामान्य uterine रक्तस्राव को परिभाषा
असामान्य uterine रक्तस्राव - त्यहाँ शरीर भास्कुलर पर्खाल वा cervix एक टियर छ जसमा सर्त। यसलाई अर्थात् त्यहाँ स्वतन्त्र भएको menstrual चक्र सम्बन्धित छैन। रक्तस्राव प्राय उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, तिनीहरूले अवधि बीच अवधिमा एक स्थान छ। कहिलेकाहीं असामान्य uterine रक्तस्राव हरेक धेरै महिना वा वर्ष एक पटक रूपमा, एक दुर्लभ जस्तै छ। साथै, यो परिभाषा लामो समयसम्म menses7अब दिन भन्दा स्थायी लागि उपयुक्त छ। साथै, रगत असामान्य हानि "महत्वपूर्ण दिन" को सम्पूर्ण अवधि लागि 200 एमएल हुन मानिन्छ। यो समस्या कुनै पनि उमेर मा उत्पन्न हुन सक्छ। रजोनिवृत्ति भएका किशोरों र महिला सहित।
असामान्य uterine रक्तस्राव: को कारण
को लैंगिक पर्चा देखि रगत को कारण फरक हुन सक्छ। तर, यो लक्षण सधैं चिकित्सा सहायताको लागि तत्काल उपचारका लागि एक कारण हो। अक्सर असामान्य uterine रक्तस्राव कारण तिनीहरूलाई लिनुअघि कि oncological pathologies वा रोगहरु गर्न हुन्छ। यो समस्या जनन को हटाउनका लागि कारण छ भन्ने तथ्यलाई कारण, यो कारण पहिचान गर्न र यसलाई हटाउन समय महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ उत्पन्न हुन सक्छ जो रक्तस्राव कारण pathologies5समूहहरू छन्। तिनीहरूमध्ये:
को गर्भाशय को रोगहरु। तिनीहरूलाई हुन्: भडकाऊ प्रक्रिया, अस्थानिक गर्भावस्था वा अवरोध, fibroids, polyps, endometriosis, क्षयरोग, क्यान्सर, आदि को खतरा ..
डिम्बाशय हर्मोन को secretion सम्बन्धित Pathologies। यी समावेश: cysts, क्यान्सर प्रक्रियाहरू appendages, प्रारम्भिक यौवन अवस्था। रक्तस्राव पनि कारण थाइरोइड रोग, तनाव, गर्भनिरोधक को स्वीकृति गर्न उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
रगत (thrombocytopenia), कलेजो वा मृगौला को विकृति।
Iatrogenic कारण। को गर्भाशय वा ovaries, IUD सम्मिलन मा सर्जरी कारण रक्तस्राव। यसबाहेक, यो iatrogenic कारण anticoagulation, र अन्य लागूपदार्थको गर्न भन्छिन्।
Dysfunctional uterine रक्तस्राव (DUB)। आफ्नो etiology पूर्ण स्पष्ट छैन। यी लैंगिक अङ्गहरूको रोगहरु र माथि सूचीबद्ध अन्य कारण कारण सम्बन्धित छैन रक्तस्राव। तिनीहरूले मस्तिष्क मा हर्मोन विनियमन को उल्लंघन देखि उत्पन्न गर्न विश्वास गरिन्छ।
लैंगिक पर्चा रक्तस्राव को विकास को संयन्त्र
असामान्य रक्तस्राव को Pathogenesis तिनीहरूले भनिन्छ गरिएको छ कारण के हो मा निर्भर गर्दछ। endometriosis, polyps को विकास र क्यान्सर को संयन्त्र समान प्रक्रियाहरु। यी अवस्थामा सबै मा, गर्भाशय छैन bleeds र आफ्नो जहाजहरु (fibroids, ट्यूमर पुछ्ने) छ कि रोग तत्व। अस्थानिक गर्भावस्था गर्भपतन प्रकार वा ट्यूब बिच्छेद रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। यो एक विशाल अंतर-पेट रक्तस्राव गराउँछ रूपमा अन्तिम विकल्प, एक महिलाको जीवन निकै खतरनाक हुन्छ। को endometrium को गर्भाशय कारण टियर जहाजहरु मा भडकाऊ प्रक्रिया। को ovaries वा मस्तिष्क, को menstrual चक्र मा परिवर्तन को हर्मोन समारोह को उल्लंघन को मामला मा। फलस्वरूप, त्यहाँ धेरै सट्टा एक वा, त्यसको विपरीत, ovulations पूर्ण अभाव हुन सक्छ। एउटै संयन्त्र छ र मौखिक निरोधकों। परिचय intrauterine उपकरण जसबाट रक्तस्राव परिणामस्वरूप, अंग गर्न यांत्रिक क्षति हुन सक्छ। केही अवस्थामा, कारण स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यसैले संयन्त्र विकास पनि अज्ञात रहनेछ।
असामान्य uterine रक्तस्राव: Gynecology मा वर्गीकरण
त्यहाँ uterine रक्तस्राव अनुसार वर्गीकृत गर्दै छन्, मापदण्ड को एक नम्बर हो। यी कारण, आवृत्ति, को menstrual चक्रको अवधि, र हराएको तरल पदार्थ (नम्र, मध्यम र गंभीर) को मात्रा समावेश गर्नुहोस्। Etiology प्रतिष्ठित: uterine, डिम्बाशय, iatrogenic र dysfunctional रक्तस्राव। DMK प्रकृति भिन्न menstrual विकार को। तिनीहरूमध्ये:
Anovulatory uterine रक्तस्राव। पनि एकल-चरण DMK रूपमा उल्लेख। तिनीहरूले अल्पकालीन दृढता वा atresia follicles फलस्वरूप उत्पन्न।
Ovulatory (2-चरण) DMC। यी कर्पस luteum को hyper- वा hypo समारोह समावेश गर्नुहोस्। अक्सर यो प्रजनन उमेर रूपमा असामान्य uterine रक्तस्राव हुन्छ।
Polimenoreya। रगत को कमी प्राय एक पटक हरेक 20 दिन भन्दा हुन्छ।
Proymenoreya। चक्र भाँचिनेछैन छ, तर "महत्वपूर्ण दिन" पछिल्लो7दिन भन्दा।
Metrorrhagia। बत्तीको ठेगान रक्तस्राव विशेषता द्वारा एक निश्चित अन्तराल बिना विकार यस प्रकारको। तिनीहरूले menstrual चक्र सम्बन्धित छैन।
लक्षण uterine रक्तस्राव
प्रायजसो, यो असम्भव तुरुन्तै लैंगिक पर्चा देखि रगत को उपस्थिति को कारण निर्धारण गर्न, लक्षण वस्तुतः सबै DMK मा समान भएकोले हो। यी पेट दुखाइ, चक्कर आना र कमजोरी समावेश गर्नुहोस्। रगत स्थिर हानि मा पनि रक्तचाप, र फिक्का छाला मा एक कमी छ। को MQM बीच भेद यसलाई कसरी धेरै, कति दिन रहन्छ गणना र अन्तराल सेट गर्न आवश्यक छ। यो एक विशेष पात्रोमा हरेक अवधि चिनो सिफारिस गरिएको छ। असामान्य uterine रक्तस्राव यौवन अवस्था भन्दा7दिन र3भन्दा कम सप्ताह अन्तरालहरू अब विशेषता। बालक जन्ममा उमेर महिलाहरु मा सामान्यतया menometrorrhagias अवलोकन छन्। menopausal लामो आक्रान्त प्रशस्त। को अन्तराल 6-8 सप्ताह छ।
uterine रक्तस्राव को निदान
असामान्य uterine रक्तस्राव पहिचान गर्न, यो आफ्नो menstrual चक्र ट्रयाक राख्न र स्त्रीरोग विशेषज्ञ गर्न आवधिक भ्रमणमा बनाउन महत्त्वपूर्ण छ। को निदान अझै पुष्टि गरिएको छ भने, यो सर्वेक्षण गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, सामान्य मूत्र र रगत (रक्तअल्पता), योनी र cervix देखि एक swab ले, एक pelvic परीक्षा प्रदर्शन। यो एक pelvic अल्ट्रासाउंड गर्न आवश्यक पनि छ। यो तपाईं सुनिंनु, cysts, polyps, र अन्य प्रक्रियाहरू उपस्थिति निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, यो हर्मोन लागि परीक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो gonadotropins को मात्र एस्ट्रोजन, तर पनि लागू हुन्छ।
uterine रक्तस्राव को खतरा
को गर्भाशय देखि असामान्य रक्तस्राव - यो एकदम खतरनाक लक्षण हो। यो लक्षण बिगडा गर्भावस्था, ट्यूमर र अन्य pathologies संकेत हुन सक्छ। को गर्भाशय को हानि गर्न, तर पनि मृत्यु मा मात्र होइन विशाल रक्तस्राव नेतृत्व। तिनीहरूले यस्तो अस्थानिक गर्भावस्था, torsion खुट्टा ट्यूमर वा myoma नोड, रूपमा रोगहरु मा फेला डिम्बाशय apoplexy। यी अवस्था तत्काल शल्य चिकित्सा हेरविचार चाहिन्छ। Neobilnye अनिरंतर रक्तस्राव त भयानक छैन। यद्यपि, तिनीहरूलाई लागि कारण फरक हुन सक्छ। तिनीहरूले polyps वा fibroids, बाँझोपन को malignancy गर्न सक्छ। तसर्थ, परीक्षा कुनै पनि उमेर को एक महिला को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
uterine रक्तस्राव कसरी व्यवहार गर्ने?
असामान्य uterine रक्तस्राव को उपचार तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ। पहिलो चरण haemostatic उपचार छ। यो रगत भारी हानि लागू हुन्छ। Uterine क्षेत्र बरफ प्याक, नसों superposed नुनखरा वा खचाखच भरिएको रातो रक्त। पनि सर्जरी (सबै भन्दा अक्सर appendages एक हटाउन) उत्पादन। रूढिवादी चिकित्सा द्वारा एक scant रक्तस्राव मा। यो MQM को कारण निर्भर गर्दछ। प्रायजसो यो हर्मोन लागूपदार्थ (लागूपदार्थको "Jess", "Yaryna") र hemostatic लागूपदार्थ ( "Dicynonum" समाधान, पाटी "क्याल्सियम gluconate", "Ascorutin")।
लक्षण र महिला मा उपदंश को संकेत
यसलाई गर्भवती महिला बाहिर र टेनिंग ओछ्यानमा sunbathe गर्न सम्भव छ
यसलाई महिनावारी समयमा चलाउन सम्भव छ? सुझाव र चाल
Lahdenpohja: ठाँउहरु र करेलियन शहर इतिहास
माइक्रोफोन जाँच कसरी राम्रो गर्ने?
कृषि योग्य भूमि के हो? अर्थ